अर्को हप्ताको शनिबार सूर्यग्रहण लाग्दै : यी राशिलाई १५ दिनसम्म पार्नेछ अशुभ प्रभाव – List Khabar
Home / समाचार / अर्को हप्ताको शनिबार सूर्यग्रहण लाग्दै : यी राशिलाई १५ दिनसम्म पार्नेछ अशुभ प्रभाव
अर्को हप्ताको शनिबार सूर्यग्रहण लाग्दै : यी राशिलाई १५ दिनसम्म पार्नेछ अशुभ प्रभाव
admin November 22, 2021 समाचार Leaveacomment 107 Views
काठमाडौँ : सन् २०२१ सालको अन्तिम सूर्य ग्रहण अर्को हप्ताको शनिबार मङ्सिर १८ गते (४ डिसेम्बर २०२१) लाग्दैछ। चन्द्रग्रहण जस्तै सूर्यग्रहण पनि एक महत्वपूर्ण खगोलीय घटना हो। ज्योतिषमा ग्रहणलाई अशुभ घटना मानिन्छ। यहीँ कारण ग्रहण कालमा शुभ कार्य र पूजा-पाठ गर्न निषेधित छ। सूर्यग्रहणको अवधिभर सूर्य पीडित हुन्छन्, जसकारण सूर्यको शुभतामा कमी आउँछ।
चर्चित ज्योतिषाचार्यहरुका अनुसार चन्द्रग्रहण पछि सन् २०२१ को अन्तिम सूर्यग्रहण यहीँ ४ डिसेम्बर अर्थात् मङ्सिर १८ गते शनिबारको दिन लाग्दैछ। यस दिन मार्ग कृष्णपक्षको औंसी तिथि छ। सूर्य ग्रहण ४ डिसेम्बरको बिहान १० बजेर ४४ मिनेटमा सुरु हुनेछ, जुन दिउँसो २ बजेर २ बजेर ५२ मिनेटमा समाप्त हुनेछ।
यो सूर्यग्रहण अन्टार्क्टिका, दक्षिण अफ्रिका, अस्ट्रेलिया र दक्षिण अमेरिकाबाट देखिनेछ। यो ग्रहण नेपालबाट भने देखिने छैन। ज्योतिष शास्त्र अनुसार नेपालबाट यो सूर्यग्रहण देखिनेछैन, जसकारण यसको सूतक काल पनि मान्य हुनेछैन। सूर्यग्रहण लाग्नुभन्दा १२ घण्टा अघि देखि नै सूतक काल सुरु हुन्छ। यो ग्रहण उपछाया हुनेछ। ज्योतिष शास्त्र अनुसार पूर्ण ग्रहण हुँदा मात्र सूतक काल मान्य हुन्छ। आंशिक या उपछाया हुँदा सूतकका नियम पालन अनिवार्य हुँदैन।
सूर्य र पृथ्वीको बीचमा चन्द्रमा हुँदा जब चन्द्रमाको छायाँ पृथ्वीमा आइपुग्छ त्यसबेला छायाँभित्र परेका मानिसले सूर्यग्रहण भएको देख्छन् । चन्द्रमाको छायाँ एक हजार किलोमिटर लामो तथा दुई सय पचास किलोमिटर चौडाइको हुन्छ । यही क्षेत्रका मानिसले सूर्यग्रहण देख्ने गर्दछन् । यस्तो छायाँ सधैँ एकै ठाउँमा देखिंदैन । त्यसैले सूर्यग्रहण कुनै देशबाट देख्न सकिन्छ भने कुनै देशबाट देख्न सकिँदैन ।
पृथ्वीमा सघन र विरल गरी दुई प्रकारको छायाँ पर्छ । सघन भनेको मुख्य छायाँ हो, जुन बढी अँध्यारो हुन्छ भने विरल भनेको कम अँध्यारो छायाँ हो । सघन छायाँले छेकेकोे ठाउँमा परेका मानिसहरूले खग्रास अथवा वलय सूर्यग्रहण भएको देख्छन् अर्थात् सूर्य पूरै ढाकिएको देख्छन् । विरल छायाँमा परेका मानिसले खण्डग्रास अर्थात् सूर्यको केही भाग मात्र छेकिएको देख्छन् । यसरी उही ग्रहण कसैले पूरै ढाकेको देख्छन् भने कसैले अलिकति मात्र देख्छन् त कसैले ग्रहण देख्ने मौका पाउँदैनन् ।
पूर्वीय समाजमा अत्रिमुनिका सन्तानहरूले खगोल अध्ययन गरेको इतिहास भेट्न सकिन्छ भने सूर्यग्रहणको जानकारी गराउने तथा गणनासमेत गर्ने प्रथम आचार्यका रूपमा अत्रिमुनिलाई ऋग्वेदले उल्लेख गरेको पाइन्छ । धर्मशास्त्रको मान्यताअनुसार ग्रहण राहु र केतुका कारणले हुने गर्दछ । चन्द्रग्रहण कारक राहु हो भने सूर्यग्रहण कारक केतु हो भन्ने मान्यता पुराण तथा धर्मशास्त्रमा भेटिन्छ । आयुर्वेदले चन्द्रग्रहणले मानिसमा कफको मात्रा बढाउँछ र मनको शक्ति कमजोर बनाउँछ भन्छ । सूर्यग्रहणले मानिसहरूको पाचन क्षमता तथा आँखाको तेजमा ह्रास गराउने गर्दछ भने पित्तशक्ति कमजोर पार्दछ भन्ने मान्यता राख्दछ । गर्भवती स्त्रीले सूर्यग्रहण वा चन्द्रग्रहण दुवै हेर्न हुन्न भन्ने मान्यता छ भने हेरेमा गर्भमा रहेको शिशुको अ¨भ¨ हुने अथवा गर्भस्राव हुनसक्ने चेतावनी दिने चलन छ । गर्भवतीलाई कुनै पनि धारिलो चीजजस्तो कैँची वा चक्कुले कुनै पनि कुरा का:_ट्न रोक्ने चलन हाम्रो समाजमा छ । यस्ता धारिला वस्तुले केही काटेमा गर्भमा रहेको शिशुको कुनै अ¨ का:__टिन्छन् र कुनै कुरा सिलाएमा विभिन्न अ¨हरू जोडिन जान्छन् भन्ने मान्यता छ ।
ग्रहण लाग्नुभन्दा पहिले नदी या तलाउमा गई स्नान गरेर शुद्घ भई विभिन्न मन्त्रको जप गर्नाले मन्त्रसिद्घि हुने मान्यता तान्त्रिकहरूको छ । हिन्दु परम्पराअनुुसार ग्रहणको सुरुमा, मध्यमा र अन्त्यमा स्नान गरी शुद्घ हुने चलन छ । ग्रहण लागेको समयमा तेल लगाउन, भोजन गर्न, जल पिउन, मल:_मुत्र त्याग गर्न, कपाल कोर्न, र*ति:_क्री-*डा गर्न, दाँत माझ्न आदि वर्जित गरिएको छ । ग्रहणको समाप्तिपछि गरिब तथा तल्लो वर्गका मानिसलाई दान गर्नाले अधिक फाइदा हुने कुरा धर्मशास्त्रमा उल्लेख छ । देवीभागवतमा भूकम्प वा ग्रहणका बेलामा आफ्नो खेतवारी खनजोत गर्न हुन्न भन्ने उल्लेख पाइन्छ ।
ग्रहण हेर्न बनाइएको बिशेष चस्माको प्रयोग गरी ग्रहण हेरेमा कुनै नोक्सानी हुन्न । सूर्यग्रहण हेर्ने अत्यन्त सुरक्षित तरिका सूर्यविम्बको प्रतिविम्ब बनाई छाया हेर्नु नै हो । तान्त्रिकहरु मन्त्र सिद्घ गराउनका निमित्त ग्रहण लागेको समयलाई उपयुक्त मान्छन् । यसैले ग्रहणका समयमा मन्त्रको साधना समेत गर्दछन् । ग्रहणसम्बन्धी अन्धविश्वास संसारभरी नै रहेको पाउन सकिन्छ । रोमनहरु ग्रहणका बेला चिच्याउने गर्दछन् भने चीनमा ग्रहण र ड्र्यागन सँगको सम्बन्धमा विश्वास गर्दछन् । प्राचीन मिश्रका राजा आफैँ सूर्यवंशी थिए । सूर्यग्रहणका बेलामा उनी शहरको मुख्य मन्दिरमा परिक्रमा गरिरहन्थे भन्ने इतिहास भेटिन्छ ।
साधारण मानिसका लागि ग्रहण एउटा अनौठो तथा असाधारण घटना हो । खगोलविद्का लागि यस्तो घटना आफ्नो गणित जाँच्ने सुनौलो अवसर हो । वैज्ञानिक तथा खगोलविद् सूर्य, चन्द्र तथा पृथ्वीको सही दूरी मापन गर्न ग्रहणको उपयोग गर्दछन् । साना बालबालिकाका लागि विज्ञानमा रुचि पैदा गराउन यस्ता घटना उपयोगी हुन्छन् ।
१५ दिनको समय अशुभ : –
सन् २०२१ को अन्तिम चन्द्रग्रहण गत शुक्रबार मङ्सिर ३ गते अर्थात नोभेम्बर १९ मा लागिसकेको छ। १५ दिन भित्रको यो दोस्रो ग्रहण हो। ज्योतिषमा यति कम समयको अन्तरालमा लाग्ने ग्रहणलाई अशुभ मानिन्छ। यो ग्रहण १२ वटै राशिहरुलाई अशुभ साबित हुनेछ।
Previous भोलि मङ्सिर ७ गते मंगलबार , कस्तो रहला तपाईको दिन ? हेर्नुहोस् भोलिको राशिफल !
Next युवतीले परिक्षामा नम्बर बढाई मागिन्, शिक्षकले राखे यस्ते प्रस्ताव! सुनेर छात्रा चकित